Tue, Jun 2, 2020 at 10:54pm
चलचित्र ‘शेरबहादुर’को टीजर सार्वजनिक, माघ १९ मा प्रर्दशन हुँदै (भिडियो)
काठमाडौं पौष ६ । चलचित्र ‘शेरबहादुर’को टीजर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक टीजरमा प्रेम, रोमान्स, एक्सन र थ्रिलर लगायतका बिषयबस्तु समेटिएका छन् । ‘शेरबहादुर’लाई आर राजवंशीले निर्देशन गरेका हुन् । धिराज प्रोडक्सनको व्यानरमा निर्मित यो फिल्ममा प्रमोद क्षेत्रीको कथा छ । चलचित्र आगामी माघ १९ गते मुलुकभर प्रर्दशनमा आउदै छ । गौरीशंकर धुनुजु र धिराज राजवंशीको लगानी रहेको फिल्ममा कोशिस क्षेत्रीको शब्द तथा..
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव पोखरामा शुरु
पोखरा, ६ पुस । पोखरा फिल्म सोसाइटीको आयोजनामा पोखरा सभागृहमा आजदेखि तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव शुरु गरिएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने सो महोत्सवमा स्वदेशी र विदेशी गरी ४३ वटा फिल्म प्रदर्शन गरिने महोत्सवका संयोजक सरोज सापकोटाले जानकारी दिए । महोत्सवमा सहभागिता जनाउन सयभन्दा बढी देशका ९०० चलचित्रको आवेदन परे पनि ४३ वटा मात्र प्रदर्शनीका लागि छनोट गरिएको बताइएको छ । महोत्सवमा..
चुलाचुलीमा मण्डला थिएटरको नाटक "सरजमिन" मञ्चन हुने
चुलाचुली, ६ पुस । ‘विश्वव्यापिकरणमा ग्रामिण सौन्दर्यको खोजी’ नारा रहेको चुलाचुली रंगमञ्चले स्थानीय आयोजक रहेर यहि माघ २ गते मण्डला थिएटर नेपालको प्रस्तुती नाटक "सरजमिन" चुलाचुलीमा मञ्चन गर्ने तयारीमा छ । पुष्कर शम्शेरले लेखेको कथा ‘परिबन्द’का आधारमा तयार गरिएको ‘सरजमिन’ नामकनाटक चुलाचुली गाउँपालिका वडा नं.-३ मा रहेको "सामुदायिक कर्वडहल"मा मञ्चनगर्ने भएको छ । १ हजार जना दर्शकलाई लक्षित गरेर चुलाचुलीमै नाटकको संस्कृति..
नायिका ‘केकी अधिकारी’ र नेता ‘लालबाबु पण्डित’ सँग–सगै नाचेपछि....
बिराटनगर, पुस ५ । यतिखेर चलचित्र ‘राज्जा रानी’ को फिल्म युनिट आफ्नो प्रमोशनमा जुटेको छ । सोही शिलशिलामा चलचित्र युनिटले बिराटनगर–१२ स्थित स्थानीय बखरी बगैंचामा एउटा पब्लिसिटी कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । उक्त कार्यक्रममन मुख्य अतिथि थिए एमाले नेता एवम् पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित । गत मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालालाई हराउँदै मोरङ क्षेत्र नम्बर..
तरकारीवाली अभिनित चलचित्र ‘लम्फू’ आगामी बैशाखमा प्रदर्शनमा आउने
काठमाडौं, पुस ४ । नेपाली चलचित्र ‘लम्फू’ को प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ । चलचित्र २०७५ बैशाख २८ गते मुलुकभर प्रदर्शनमा आउने भएको छ । छायांकनको लागि लामो समय लागेको यो चलचित्रबाट नव–नायक कबिर खड्काले डेब्यू गरेका छन् । कबिरले नेपालको एक मात्र फिल्म कलेज ओस्कार इन्टरनेशनल कलेजबाट कलाकारितामा स्नातक तहको अध्ययन गरेका हुन् । कबिर सहित यो चलचित्रमा सलोन बस्नेत, मरिश्का पोखरेल,..
अनमोल अभिनित ‘कृ’ को ट्रेलर रेकर्ड राख्दै नम्बर वानमा (भिडियो)
काठमाडौं पौष २ । बहु–प्रतिक्षित चलचित्र ‘कृ’को ट्रेलर नयाँ रेकर्ड कायम राख्न सफल भएको छ । रिलिज भएको एक घण्टा मै सर्वाधिक हेरिएको सूचीमा परेको थियो । अहिले चलचित्र कृ ट्रेलर नेपालको ट्रेन्डिङ्ग नम्बर वानमा रहेको छ । यस्तै चलचित्रको ट्रेलर नेपालमा मात्र नभएर कतारमा ट्रेन्डिङ्गको ९ औ स्थानमा, अस्ट्रेलिया र जापानको ट्रेन्डिङ्गमा क्रमस ४२ र ४३ औ स्थानमा रहेको छ ।..
अत्याधिक रुचाइएको भिडियो गीत ‘साइँली’ माथि चलचित्र बन्दै
काठमाडौं, मंसिर २९ । युट्युबमा च्यानलमा निकै रुचाइएको भिडियो गीत ‘साइँली’ लाई दर्शकले अब फिल्मको पर्दामा पनि हेर्न पाउने भएका छन् । गायक हेमन्त रानाको स्वरमा रहेको गीतलाई जिएच इन्टरटेनमेन्ट ब्यानरले निर्माण गरेको थियो । यही ब्यानरले चलचित्र ‘साइँली’ निर्माण गर्न लागेको हो । बिहीवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच फिल्मको औपचारिक निर्माण घोषणा गरिएको छ । भिडियोमा गौरव पहाडी र नायिका मेनुका प्रधानको..
अनमोल र अदीति अभिनित चलचित्र ‘कृ’ को नयाँ पोस्टर सार्वजनिक
काठमाडौं, मंसिर २८ । अनमोल केसी स्टारर चलचित्र ‘कृ’ को एक्सन पछि रोमान्टिक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक दोस्रो पोस्टरमा अनमोलको अंगालोमा नवनायिका अदिती बुढाथोकी देखिएकी छिन् । ‘कृ’ को पोस्टर टौवा क्रियशनले डिजाइन गरेको हो । फिल्मको ट्रेलर यही शुक्रबार रिलिज हुँदैछ । सुवास ईन्टरटेन्मेन्ट प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको कृ लाई सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गरेका छन् । कृ मा भुवन केसीको..
‘कृ’सँग छलफलको प्रयास विफल भएपछि श्वेताको ‘कान्छी’ फागुन ४ मा
काठमाडौं मंसिर २७ । नेपाली सिने जगतकी चर्चित नायिका श्वेता खड्काले आफूले निर्माण गरेको चलचित्रको प्रदर्शन मिति सारेकि छिन् । उनले माघ २६ गते बाट फागुन ४ गतेका लागि प्रदर्शन मिति सारेको बताएकी हुन् । माघ २६ गते चलचित्र क्षेत्रका चकलेटि नायकको छवि बनाएका अनमोल केसीको कृ पनि प्रदर्शनमा आउदै छ । र नायिका श्वेताले भुवन केसी दाजु प्रतिको सम्मानमा चलचित्रको प्रदर्शन..
चलचित्र ‘पिंजडा ब्याक अगेन’ को ट्रेलर सार्वजनिक(भिडियो सहित)
काठमाडौं मंसिर २६ निखिल उप्रेती स्टारर फिल्म ‘पिंजडा ब्याक अगेन’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार आयोजना गरिएको ट्रेलर रिलिज समारोहमा भने अभिनेता उप्रेती भने अनुपस्थित रहेका थिए । निर्देशक हिमाल केसी, नायिका सारा शिर्पाली, निर्माता श्रीराम बराल लगायत कलाकारहरु चलचित्रको ट्रेलर सार्बजनिकमा उपस्थित थिए । आगामी माघ ४ गते प्रदर्शन हुने पिंजडा ब्याक अगेन को ट्रेलर कमर्सियल छ । एक्सन, कमेडी,..
चलचित्र ‘माई लभ’ ले ल्यायो दर्शकका लागि जापान जाने सुवर्ण अवसर
काठमाडौं मंसिर २५ । जापानिज र नेपाली कलाकार अभिनित फिल्म ‘माई लभ’ले तिब्रताका साथ आफ्नो प्रचार सुरु गरेको छ । फिल्मले प्रचारको नयाँ माध्यम पनि छनोट गरिसकेको छ । फिल्मले जापान जान चाहने दर्शकका लागि सुवर्ण अवसरको घोषणा गरेको हो । निर्माण टिमका अनुसार दर्शकले टिकट नम्वर र हालको नाम माई लभको फेसबुक पेजमा ट्याग वा ईन्वक्स गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि गोलाप्रथा..
सारा र सुशान्तको रोमान्सले भरिएको ‘केदारनाथ’ १२ करोडको सेटमा खिचिँदै
काठमाडौं मंसिर २२ । अभिनेता सैफअली खानकी छोरी सारा अलि खानको डेब्यु फिल्म ‘केदारनाथ’को पहिलो चरणको छायांकन सकिएको छ । सारासँग यो फिल्ममा बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले रोमान्स गर्दैछन् । हालैमा फिल्मको निर्माण टीमले ‘केदारनाथ’का लागि मुम्बई फिल्म सिटीमा करीब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर एउटा भव्य सेट तयार गरेको छ । सो सेटमा केदारनाथ मन्दिर र वरपरको वस्तुस्थितिको झल्को दिने..
केकीको भिडन्त बलिउड र साउथ सुपरस्टारसँग
काठमाडौं मंसिर २० । नेपाली चलचित्र जगतकी चर्चित नायिका तथा मोडल केकी अधिकारीले अब बलिउड सुपरस्टार र साउथ सुपरस्टारसँग भिडन्त गर्नु पर्ने भएको छ । उनले पहिलो पटक निर्माण गरेको फिल्म ‘कोहलपुर एक्सपे्रस’ आगामी बैशाख १४ गते प्रदर्शनमा आउँदै छ । सोही मितिमा बलिउड सुपरस्टार अक्षय कुमार र साउथ सुपरस्टार रजनीकान्तको चलचित्रसँग भिडन्त गर्नु पर्ने भएको छ । यस अघि उनले नेपाली सिने..
चलचित्र ‘बटरफ्लाई’ को ट्रेलर सार्वजनिक, आर्यनको दुई रुप (भिडियो सहित)
काठमाडौं मंसिर १७ । ’के म तिम्रो होइन र’ बाट नेपाली सिने जगतमा भित्रिएका नव नायक आर्यन अधिकारी र नायिका प्रियंका कार्की स्टारर फिल्म ‘बटरफ्लाई’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा आर्यनका दुई रुप देख्न सकिन्छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा प्रेम, रोमान्स, एक्सन र थ्रिलर बिषयबस्तु समेटिएको छ । ‘म गाउँदिन अब गीत’ बोलको गीतले फिल्मको हाइप बनाउँदै गर्दा ट्रेलरले पनि दर्शकको मन..
आगामी पुसमा प्रदर्शनमा आउँने चलचित्र ‘राज्जा रानी’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो सहित)
काठमाडौं मंसिर १५ । चलचित्र ‘रज्जा रानी’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्र यूनिटले ‘रज्जा रानी’को ट्रेलर शुक्रबार युट्युव मार्फत गरेका हुन् । ट्रेलरमा सामाजिक विषय र प्रेमकथा उठान गरिएको पाइन्छ । जसमा मुख्य कलाकारहरुको फिचरिङ रहेको छ । फिल्ममा केकी अधिकारी, नाजिर हुसेनसँगै कामेश्वर चौरासिया, दीपक क्षेत्री लगायत कलाकारको मुख्य भूमिका छ। फिल्मले पश्चिम तराईस्थित जनजाति समुदायको संवेदना र प्रेमकथा चित्रण गर्छ..
चलचित्र ‘फिर्के’ को कमेडी ट्रेलर सार्वजनिक, पुष २१ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने (भिडियो सहित)
काठमाडौं मंसिर १३ । प्रदर्शन मिति फेरबदल गर्दै फिल्म ‘फिर्के’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । बुधवार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै निर्माण पक्षले आगामी पुष १४ गतेबाट पोस्टपोन्ड भएर ‘फिर्के’ पुष २१ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने जानकारी दिएको छ । फिल्मको सार्वजनिक ट्रेलरमा भने कमेडी संवादले भरिएको छ । ’ईकु’को नामले चर्चित सुलेमान शंकरको प्रस्तुतीमा बनेको फिल्ममा अर्पण थापा, सुलेमान शंकर, ऋचा शर्मा,..
चलचित्र ‘रोमियो एण्ड मुना’को टिजर सार्वजनिक
काठमाडौं, मंसिर ११ । चलचित्र ‘रोमियो एण्ड मुना’को टिजर सार्वजनिक भएको छ।चलचित्रको टिजरमा चराको जोडीलाई राखिएको छ । नरेश कुमार केसी द्वारा निर्देशित चलचित्र रोमियो एण्ड मुनामा नायक विनय श्रेष्ठ र नायिका सृष्टि श्रेष्ठ शीर्ष भूमिकामा छन् । फागुन ११ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरिएको चलचित्रको हाल पोष्ट प्रोडक्सनको कार्य हुँदै छ । चलचित्रलार्इ प्रशन्न गोपाली, राम शर्मा, कविन शाक्य र विनय..
कमेडी फिल्म ’गोलमाल ४’ ब्लकबस्टरको लिस्टमा
काठमाडौं मंसिर १० । बलिउड फिल्म ’गोलमाल’को चौथो संस्करण ’गोलमाल अगेन’को प्रदर्शन भारत साथै अन्य केही देशमा निरन्तर चलिरहेको छ । प्रदर्शनमा आएको एक महिनासम्म पनि दर्शकको साथ पाइरहेको कमेडीे फिल्म ब्लकबस्टर लिस्टमा परेको छ । फिल्म वर्ष २०१७ को लागि २०० करोड कमाउने पहिलो हिन्दी फिल्म बन्यो । फिल्म ’बाहुबली २’ हिन्दी डबपछि सर्वा्धिक ग्रस कलेक्शन गर्ने दोस्रो फिल्म बनेको हो। त्यस्तै..
लामो पर्खाईपछि चलचित्र ‘तिमीसँग’ चैत २३ मा देशभर प्रदर्शनमा आउदै
काठमाडौं मंसिर ८। नेपाली सिने जगतको पछिल्लो समयको चर्चित तथा सुन्दरी नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अभिनित चलचित्र 'तिमीसँग' यसै वर्षको अन्तिममा रिलिज हुने भएको छ । यसै वर्षको भाद्र ८ गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरे पनि नायिका शाहद्वारा अभिनित अर्काे फिल्म 'ए मेरो हजुर २' भाद्र १६ गते प्रदर्शनमा आउने भए पछि 'तिमीसँग'को रिलिज समय पोस्टपोन्ड भएको थियो । अब चाँहि चलचित्र 'तिमीसँग'..
‘ए मेरो हजुर २' को रेड कार्पेट शोका लागि झरना र साम्राज्ञी सिड्नीमा
८ मंसिर, काठमाडौं । भोलि सनिवार हुने ‘ए मेरो हजुर २’ को रेड कार्पेट शोका लागि नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र झरना थापा सिड्नी पुगेका छन् । नेपालबाट अभिनेत्री तथा निर्देशक झरना थापा र फिल्मकी मुख्य नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई सिड्नी विमानस्थलमा आयोजक रविन्द्र कुमार शर्मा, रोशन भट्टराई लगायतले स्वागत गरेका थिए। नव नायक सलिनमान बानियाँ तथा नायिका साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाह अभिनित फिल्मले..
मंसिर २९ गते रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘सुपर गोर्खे’को पोस्टर सार्वजनिक
काठमाडौं मंसिर ७ । ज्योतिषसँग साइत हेराएर चलचित्र ‘सुपर गोर्खे’को पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । बिहिबार सवा ११ बजे फिल्मको पोस्टर सार्वजनिक गरिएको हो । पोस्टरमा गुड, व्याड र उग्ली म्यानहरुलाई प्रस्तुत गरिएको छ । नाइँ नभन्नू ल’ गर्ल ऋचा सिंह ठकुरी अभिनीत फिल्म ‘सुपर गोर्खे’को विहीबार सार्वजनिक गरिएको पोस्टरमा भने नायिका ऋचा देखिएकी छैनन् । अविर हाउस प्रोडक्सनमा बनेको फिल्मले दैवी शक्तिबिना..
रंगमञ्च : अनेकौ सपना, कठिन संर्घष अनि उचित अवसरको ढोका
काठमाडौं मंसिर ३ । धेरै भयो नेपालमा रंगमञ्चको सुरुवात भएको र थोरै मात्रै भयो यो क्षेत्र व्यवसायिकताको बाटोमा लाग्न थालेको । बहस जारी छ – कला र व्यवसायिकता बीच, कला र व्यवसायिकता दुवै अस्तित्वमा छन् ? सायद समानान्तर पनि । पुग–नपुग ५० वर्गकिलोमिटरको काठमाडौंमा ३ वटा नियमित नाटक मञ्च नगर्ने थिएटरहरु पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । धेरैका सपनाहरुको सिँगो कथा छ यस राजधानीसँग ।..
नेपालको सफल प्रदर्शन पश्चात जापान जाँदै ‘ऐश्वर्य’ टिम
काठमाडौं कार्तिक २८। चलचित्र 'ऐश्वर्य' प्रदर्शनकै लागि निर्माता एवं नायक रमेश उप्रेति जापान जाँदै छन् । नेपालको सफल प्रदर्शन पश्चात चलचित्र ऐश्वर्य अब जापानमा प्रदर्शन हुन लागेको हो । निर्माता तथा नायक रमेश उप्रेती यसै साता जापान जाँदैछन् । फिल्मको शो नोभेम्वेर १९ मा हुनेछ । ‘ऐश्वर्य’लाई जापान वासीले नोभेम्बर १९ तारिख आईतवारका दिन टोकियो स्थित नाकानो जेरो हलमा हेर्न पाउनेछँन् ।रमेश उप्रेती,..
अनमोलको 'कृ' र श्वेताको 'कान्छी'को भिडन्त हुँदै
काठमाडौं कार्तिक २६। पछिल्लो समय चर्चाको शिखर चुम्न सफल नायक अनमोल केसीद्वारा अभिनित फिल्म ‘कृ’ र दयाहाङ राई र श्वेता खड्का अभिनीत फिल्म ‘कान्छी’ आगामी माघ २६ गते एकसाथ प्रदर्शनमा आउँदैछन् । अहिले यहि विषयलाई लिएर नेपाली सिने जगत तरंगीत बनेको छ । पटक–पटक प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै पोष्टपोन्ड भएको ‘कृ’ अब यो मितिबाट पछाडि नहट्ने तयारीमा देखिएको छ । यस्तै, ‘कान्छी’ले..
पाइरेसीको मारमा "लुट २" र "कालो पोथी"
काठमाडौं कार्तिक २३। यो साता दुई नेपाली कथानक चलचित्र पाइरेसीको मारमा परेका छन् । चलचित्र कालो पोथी र लुट २ पाइरेसीको चपेटामा परेका हुन् । यी दुवै फिल्म वाच भिडियो अनलाइन नामक फेसबुक पेजबाट लिक भएको बताइएको छ । गत मङ्गलबार फेसबुकमा लुट २ अपलोड भएको थियो । चरणगत रुपमा विभाजन गरी फिल्म लुटको दोस्रो संस्करण राखिएको थियो । जसमा अन्तराष्ट्रिय बिक्रीको आधिकार..
चलचित्र "तान्द्रो’’ले गर्यो प्रिमियर, सबैबाट उत्कृष्ट प्रतिक्रिया
काठमाडौं कार्तिक २३। साम्तेन भुटिया निर्दे्शित फिल्म ‘’तान्द्रो’’ले बुधवार काठमाडौँमा प्रेस ‘’शो’’ सपन्न गरेको छ । निर्माण टिम, चलचित्रकर्मी एवंम् पत्रकारबीच देखाईएको फिल्मले सबैबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ । वास्तविक घट्नामा आधारित यस फिल्ममा दया हाङ राई, बुद्धि तामाङ, राम बाबु गुरुङ, मनिराम पोख्रेल, कमल मणि नेपाल, राजन खतिवडा, जुनु बिष्ट, बाल्मिकी पोख्रेल, सम्राट थापा लगायत अन्यको मुख्य अभिनय छ । सतिस कुमार..
सलमानको ‘टाईगर जिंदा है’ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
एजेन्सी कार्तिक २१। बलिउडको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘टाईगर जिन्दा है’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । अभिनेता सलमान खान र अभिनेत्री कैटरिन कैफ अभिनित चलचित्र ‘टाईगर जिन्दा है’ को ट्रेलर दमदार रहेको छ । मङगलबार रिलिज भएको ट्रेलरमा सलमानको एक्सन अवतार देख्न सकिन्छ । आगामी डिसेम्बर २२ बाट प्रदर्शनमा आउने ‘टाईगर जिन्दा है’ को सवा तीन मिनेट लामो ट्रेलर एक्सन र रोमान्सपूर्ण छ..
चलचित्र कान्छीको ‘चरी चट्ट’ युट्युब ट्रेन्डिङको शिर्ष स्थानमा
काठमाडौं कार्तिक २०। बहु प्रतिक्षित फिल्म ‘’कान्छी’’को ‘चरी चट्ट परि’ बोलको गीत युट्युवको पहिलो ट्रेन्डीङमा पर्न सफल भएको छ । युट्युवको ट्रेन्डीङले सर्वा्धिक हेरिएको संकेत दिन्छ । सार्वजनिक गरेको केहि दिनमै फिल्मको यस गीतलाई अत्याधिक दर्शकले रुचाएका छन् । सर्वाधिक हेरिएको यस गीतलाई यो समाचार तयार पार्दासम्म १८ लाख नजिकले हेरेका छन् । यस गीतमा अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री स्वेता खड्काको..
नायिका निशाको यादमा तड्पिदै नायक खान (भिडियो)
आईतवार, कार्तिक १९, २०७४ साल
काठमाडौं कार्तिक १९ । प्रदर्शनको मिति नजिकिए सँगै चलचित्र "रोमियो"को वियोगान्त गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । आगामी कार्तिक २४ गते देशभर प्रदर्शन हुन लागेको रोमियोको वियोगान्त गीत सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त भिडियोमा नायिका निशा अधिकारीको यादमा नायक हसनराजा खान तड्पिएका छन् । गीतमा कुर्बान अली खान र अमृता लिम्बुको आवाज रहेको छ भने कुर्वानकै शब्द तथा संगीत छ । ‘ल्याङ..
चलचित्र "कान्छी" को पहिलो गीत सार्वजनिक (भिडियो)
शुक्रबार, कार्तिक १७, २०७४ साल
काठमाडौं कार्तिक १७ । बहुप्रतिक्षित चलचित्र "कान्छी"को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्र टोलीले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री श्वेता खड्काको दमदार नाच समावेश ‘’चरी चट्ट परि’’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । अभिनयमा अब्बल दयाले यसै गीतबाट आफु नाचमा पनि कोहि भन्दा कम नरहेको प्रस्टाएका छन् । यसै चलचित्र मार्फत सबैको मनमुटुमा बस्न सफल सुन्दर नायिका..
Results 546: You are at page 16 of 19